Photo Essay: On St. Paul's East Side, Neighborhoods on the Rise
Qeybta:Aaladda7 min akhris
On St. Paul's East Side, Neighborhoods on Rise
By Sarah Hernandez, Sawirro ay sameeyeen Molly Miles
On East Side of St. Paul, jidadka ku garaacan tamar iyo dhadhan. Xaruunta dhaqamada kala duwan waxay bixisaa iid ah indhaha, iyo sanka iyo dhegaha! Suuqyadu waxay iibiyaan cagaarka khardal leh iyo salad papaya oo leh kiriimka kalluunka, qolal farshaxan oo ku wareegsan goobaha dabka, iyo waxyaabo kale oo badan.
Muhaajiriinta fasalka shaqeeya waxay ku noolyihiin dhinaca Bariga tan iyo 1800kii. Mid ka mid ah Bariga Sider wuxuu dhigayaa: "Mar walba waa meel ay dadku u imaan karaan si ay u abuuraan guri." Inkasta oo taariikhdeedii ugu dambaysay ee halganka iyo maalgashiga, ganacsiyada cusub iyo goobaha hal-abuurka ah ayaa iyaguna ka soo horjeeda ganacsiyada qoyska oo muddo dheer ka shaqaynayay aagga . Bariga Siders waxay ka hadlaan dareenka sii kordhaya ee kacdoonka iyo fursadda ayan dareemayn tobannaan sano.
Istaraatiijiyada muhiimka ah ee McKnight's Barnaamijka gobolka iyo beelaha waa in la abuuro fursado iyada oo lagu dhiirrigelinayo xaafadaha dhaqaale ee firfircoon. Dhinaca East Side waa mid ka mid ah xaafadaha McKnight iyo kuwa kale ee maalgeliya, iyada oo loo marayo iskaashatada sida Kooxda Hantidhawrka Bariga Dhexe, waxay diiradda saaraan dareenka. Mar kasta oo aan la kulmo Bariga Sider, waxan maqlaa habka kale ee farshaxanka, ganacsatada, iyo kooxaha beeluhu ay neefsanayaan nolasha cusub ee aagga. Waxaan bartay in xoogga East Side yahay dadkeeda.
In ruuxa dadka, meel, iyo suurtagal, waxaan soo bandhigi karnaa qoraalka sawirkan.
Plaza Del Sol iyo Payne Avenue: Dhisidda Ganacsiga Cusub
Plaza Del Sol waa xarun wax lagu iibiyo iyo ganacsi yar yar.
Plaza Del Sol waa meel aad u iftiimaya Payne Avenue si ay u iftiimiso qorraxda qorraxda, iyo weliba - qiimaha dhaqaale ee ay ku kordhiso bulsho u baahan shaqooyin. Gudaha, barafka iyo xoqitaanka iskuulka barbaradka ah, alaabada la gashado ee dukaanka dahabka ah, iyo aromaska makhaayadaha iyo makhaayadaha, oo ay ku jiraan digaagga digaagga ee rotisserie, buuxi booska.
"Halgan ganacsiyada yaryar oo badan ayaa ah helitaanka caasimadda, sidaas darteed waxaan raadiyaa dadka runtii doonaya in ay lahaadaan ganacsi oo ay siiyaan fursad. Waa maalgelin bulshadeyda. " - SONIA ORTEGA, SHAQAALAHA BULSHADA
Sonia Ortega, oo ah ganacsade guuleystay, ayaa iibsaday oo dib u habaynaya dhismaha mar-bannaan ee sanadka 2014-ka. Halkee dadka badankoodu waxay arkeen dhismo hore oo ku yaala waddo "adag oo adag", Ortega waxay arkeen suurtagal aan la awoodin.
Dhismaha Plaza Del Sol Sonia Ortega (Xarun) ayaa fadhiya si ay ula hadlaan macaamiisha.
Way adagtahay in la helo Ortega. Maalmaha sabtida ee Sabtida ah ee aadka u mashquulsan, waxay badanaa ku xiran tahay kafeega macaamiisha waxayna siiyaan talooyin ku wajahan kuwa ganacsadaha leh. Iyadoo ay maamusho dhowr shirkadood, Plaza Del Sol waa mashruuc dabacsan.
"Ma ahan wax walba oo aad sameyneyso. Waa inaad haysataa ujeedo nolosha ah. Anigu waxaan daawanayaa kireysteyaashayada ganacsiyada iyo mustaqbalka mustaqbalka ee qoysaskooda, "ayuu yiri Ortega, oo ah haajirey ka timid Mexico. "Taasi waa waxa aan tixgelinayo guusha."
Kuwa kale ee bulshada ayaa sidoo kale lagu maalgaliyay inay ka caawiyaan kiraystayaasha inay guuleystaan. Xarunta Horumarinta Dhaqaalaha Latino, deeq bixiyaha McKnight, waxay bixisaa wacyi galin, horumarin ganacsi, iyo amaah ay ku siiso ganacsiyada Plaza Del Sol iyo geeska Bari.
Tico Pena waxay timaha ka jartay wiil dhalinyaro ah Iskuulka Moler Barber.
Sida aad u aragto Tico Pena si kalsooni leh ula shaqeyneysa labo kabo, halka uu kula hadlo macmiilkiisa da'da ah ee Isbaanishka, waxaad u sheegi kartaa inuu hore u sameeyay. Xaqiiqdii, Pena ayaa timo u gooyey qoys iyo saaxiibo sagaal sano. Markuu arkay Dugsiga Molber Barber wuxuu ka furay saddex aqal oo gurigiisa ka mid ah, waxaay ka dhigtay mid aad u fudud in uu helo liisanka. Wuxuu ka badan yahay nus illaa sagaalka bilood ee barnaamijka qashinka ah, isaga oo keenaya in uu aad ugu dhawaado riyadiisa ah inuu furo dukaamo qaali ah oo ku yaala dhinaca bari.
Markii uu dugsigu furay albaabadiisa Plaza Del Sol sanadka 2015, wuxuu ahaa dugsigii ugu horreeyay ee cusub ee Minneapolis ku yaal 35 sano, waana dugsiga kaliya ee laba luqoodle ah oo ku yaal gobolka. Calaamada Pro: Qalabka timaha ee ardayda waxay ku kacayaan $ 7.50. Dugsigu wuxuu u furan yahay dadweynaha Talaado ilaa Sabtida, 10 subaxnimo - 5 galabnimo.
Payne Avenue waa mecca goobta Bariga ee goobta cunnada ee mashquulsan.
Markaad booqanayso Payne Avenue, waxaa habboon in aad gaajeysid. Iyada oo ay ka badan yihiin daraasad daraasad ah oo ka yar hal mitir oo isku xiran oo u dhexeeya Maryland Avenue iyo Phalen Boulevard, aaggu waxay noqdeen meel casho ah. Muuqaalka dharka culus ayaa aad u yareeyay heerarka banaanbaxyada ee dukaamada ee Payne Avenue.
Sannadkii 2012, in ka badan mid ka mid ah afartii bakhaar kasta ee ku yaallay Waddada Payne ayaa bannaan. Sannadkii 2017, wuxuu hoos ugu dhacay mid ka mid ah 10. Muddadaas shanta sano ah, Shirkadda Horumarinta Xaafadda East Side, oo ah deeq-bixiye McKnight, waxay dhammaystireen sagaal mashruuc oo horumarineed oo dhisme ganacsi ah oo ku saabsan Payne oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar, taas oo u dhiganta $3.2 milyan maalgashi gaar loo leeyahay. . Mashaariicdu waxay abuureen 77 shaqo waxayna gacan ka geysteen joogtaynta 66 boos.
Hmong Village: A Global Marketplace
Degmada Village waa suuqa aad ka heli karto dhadhanka Koonfur Aasiya.
Dhanka dibada, tuulada degmada waxay u egtahay dhismo bakhaarro aan qeexin. Socda dhexdeeda, oo waa labeentarka xarumaha ganacsiga, iibiyeyaasha soo saarka cusub, iyo kijinka shisheeye.
Halkaan waxaa ku yaal 320 shirkadood, oo ay ku jiraan 18 maqaayad, lafo xanuunka, farmashiye, qolal timo, wakiil caymis, shirkad sharci ah, iyo ganacsiyo badan oo yaryar. Dukaamadu waxay ka heli karaan wax kasta oo ka yimaada dhar-goyska illaa alaabada quruxda xayawaanka ee daawooyinka si loogu wareejiyo foornada. Tilmaame loogu talagalay soo-booqdayaasha cusub: Soo qaado lacag caddaan ah marka qaar iibiyayaashu aysan aqbalin kaararka deynta.
Lix qof oo ganacsato ah ayaa furay suuqa sannadkii 2010. Tan iyo markaas, waxay noqotay mid ka mid ah xarumaha tafaariiqda ugu weyn ee St. Paul. Suuqu waa meel aad u badan oo loogu talagalay dadka Soomaalida ah ee degaanka ah - 66,000 oo ka mid ah ayaa ku xooggan aagaggeena.
Rootiyada asaliga ah: Damaashaadka Dhaqanka iyo Bulshada
Xarunta Farshaxanka Dhaqanka ee Xididdada Asaliga ah ayaa laga furay xaafadda Dayton ee Bluff bishii Maajo 2017.
Waxaa aasaasay koox u dhalatay dalka Spain, Sergio Cenouch iyo Mary Anne Quiroz, Rootiyada asaliga ah Xarunta Fanka Dhaqanka waa meel lagu dabaaldego farshaxanka, dhaqanka, iyo bulshada. Habeen kasta, qof booqde ah ayaa laga yaabaa in uu helo riwaayadda qoob-ka-ciyaarka hip-hop ama bandhig sawir leh farshaxanno ajaanib ah oo ka socda xaafadda. Quiroz ayaa la wadaagay sida Xarunta mar uun marti u ahayd lucha libre, oo ah nooc ka mid ah tartanka Mexico oo leh dagaalyahanada maskaxda ah oo ah farsamooyin farshaxan ah sida cayaaraha.
Aiyana Sol Machado oo ka tirsan Bomba Karaya Güey oo kudhacday dhacdo farshaxan oo farshaxan asal ah.
Inta lagu jiro gu'gii St. Paul Art Crawl, Rootska asaliga ah ayaa martigeliyay a bombaso, oo ah tamar xoogan oo xeeldheer xajinta Puerto Rican. Bomba muusikada - nooc ka mid ah muusikada Kariibiyaanka ah ee isku dhafan Afrika, Yurub, iyo saamayntii asaliga ahaa-waxay ku soo daadiyeen waddooyinka.
Waxyaabaha wanaagsan ayaa ka dhacaya dhinaca Bariga, mana sugi karno inaan aragno waxa kale ee soo baxa.
Sideen uga Hortagi karnaa kacsanaanta?
Video Diseembar 2019
Qiyaasaha Guryaha MN
Khayraadka Webka Diseembar 2019